Hello Nepal News » इएल क्लासिको भिडन्तको तयारी : कोम्यानले जिदानलाई दिए कठिन ‘होमवर्क’ !
इएल क्लासिको भिडन्तको तयारी : कोम्यानले जिदानलाई दिए कठिन ‘होमवर्क’ !
स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा आज राति सिजनको बहुप्रतीक्षित दोस्रो इएल क्लासिको खेल हुँदैछ । स्पेनका दुई कट्टर प्रतिस्पर्धी क्लबहरू रियल मड्रिड र बार्सिलोना रियलको घरेलु मैदानमा भिड्दा यो खेल निकै घमाशान हुनेवाला पक्का छ । ला लिगाको सिजन निर्णायक मोडतर्फ पुग्दै गर्दा हुन लागेको यो खेलको हार–जितले निकै ठूलो अर्थ राख्नेछ । दुवै टिमका लागि यो खेल सिजनकै एक सर्वाधिक ठूलो र महत्त्वपूर्ण खेल हुने भएको छ ।
सो खेलअघि बार्सिलोनाका प्रमुख प्रशिक्षक रोनाल्ड कोम्यानले रियलका प्रमुख प्रशिक्षक जिनेदिन जिदानलाई गृहकार्य दिएका छन् । खेलअघि आयोजित पत्रकार सम्मलेनमा कुरा गर्दै डच म्यानेजरले क्लासिकोलाई लिएर रियल मड्रिडलाई घुमाउरो पारामा सन्देश दिएका छन् कि, बार्सिलोना रियलको घरमा पुग्दा त्यहाँ घरेलु टोलीलाई उसले सजिलै छाड्नेवाला छैन । सांकेतिक रूपमा कुरा गर्दै कोम्यानले यसलाई गहृकार्य अर्थात् होमवर्क भनेका छन् । केम्यानका अनुसार बार्सिलोनाको सामना गर्न रियलले धेरै नै होमवर्क गर्नुपर्ने छ ।
‘यो सिजनकै एक ठूलो खेल हो । क्लासिको के हो र यसले के अर्थ राख्छ, त्यो सबैलाई थाहा छ । यो फुबलभन्दा बढी प्रतिष्ठाको खेल हो । मलाई यो अहिले प्रशिक्षक मात्रै नभएर खेलाडी हुँदादेखि नै थाहा छ,’ कोम्यानले भनेका छन्, ‘भोलि हामी कति महत्त्वपूर्ण खेल खेल्न गइहरेहका छौं, त्यो दुवै टिमलाई थाहा छ । यो खेल जित्यो भने के हुन्छ र जितेन भने के हुन्छ भन्ने कुरा पनि दुवै टिमलाई थाहा छ । यो एक शानदार खेल हुनेवाला छ ।’
ला लिगामा बार्सिलोनाले पछिल्ला २० खेलमा कुनै पनि खेल हारेको छैन । कुनैबेला लिग लिडरभन्दा १३ अंकले पछि परेको बार्सिलोनाले आज अंक दूरी मात्रै १ मा खुम्च्याएको छ । कोम्यान र उनको टिम अब निर्णायक क्लासिकोमा पनि त्यही लयलाई कायम राखेर उपाधिको वेगमै रहन चाहन्छ । तर, त्यसका लागि उसले रियललाई उसकै घरमा जितेर देखाउनुपर्छ । के बार्सिलोना तयार छ त ? कोम्यान भन्छन्, ‘हामीलाई च्याम्पियन्स लिगको दबाब छैन । हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान अहिले लिगमै छ । त्यसैले हामीले क्लासिकोका लागि राम्रो तयारी गरेका छौं । हामी आफ्नो गति र स्प्रिडलाई टुट्न दिनेछैनौं ।’
पत्रकारले ‘रियल मड्रिडको ट्रेनिङ ग्राउन्डमा खेल्नका लागि के के तयारी छन् त’ भनेर सोधेको प्रश्नमा कोम्यानले बडा कूटनीतिक जवाफ दिए । कोम्यानले आफू र आफ्नो टिमको सामना आफ्नै टेनिङ ग्राउन्डमा गर्न रियल मड्रिडलाई मनग्ये गृहकार्य दिएको बताए । ‘मैले भनें नि, हामी सम्पूर्ण रूपले तयार छौं । मलाई लाग्छ, हामीले रियल मड्रिडलाई धेरै होमवर्क दिएका छौं । थाहा छैन, उनीहरूले होमवर्क कसरी गरेर आउँछन् । हामी अर्को एक शानदार जित र नतिजाका लागि अन्तिम समयसम्म पनि टिमका रूपमा मेहनत गर्नेछौं ।’
कोम्यानले रियलका प्रमुख खेलाडीहरू डिफेन्डर सर्जियो रामोस, राफाएल भाराने, ड्यानी कार्भाहाल र इडेन हाजार्ड टोलीमा नरहेको विषयमा पनि बताए । यी सबै खेलाडी नहुँदा पनि रियलसँग क्लासिको जित्न सक्ने टिम रहेको कोम्यानको भनाइ थियो । ‘यी सबै खेलाडी क्लासिकोमा हुन् भन्ने हामी चाहन्थ्यौं । तर, हुनेछैनन् । उनीहरू नहुनु भनेको ठूलो चुनौती कम हुनु हो । तर, अझै पनि रियल मड्रिडसँग उनीहरूबिना पनि क्लासिको जित्न सक्ने एक मजबुत टिम छ । म यो टिमको सधैं सम्मान गर्छु । हामी खेलका लागि आतुर छौं ।’
कोम्यानले ला लिगा जित्न वा जित्ने दौडमा रहने हो भने रियल र बार्सिलोना दुवैले क्लासिको जित्नुपर्ने भनाइ राखेका छन् । ‘अहिले लिगमा कडा प्रतिस्पर्धा छ । त्यहाँ ठूलो अन्तर छैन । र, अब धेरै खेल पनि बाँकी छैनन् । क्लासिकोपछि हामीसँग ८ खेल बाँकी हुनेछन्,’ कोम्यानले भनेका छन्, ‘बार्सिलोना र रियल उपाधि जित्न वा जित्ने दौडमा रहन चाहन्छन् भने क्लासिको जित्नैपर्छ । दुवै टिमलाई कस्तो समयमा क्लासिको हुँदैछ भन्ने राम्रोसँग थाहा छ ।’
प्रकाशित मिति २७ चैत्र २०७७, शुक्रबार २२:१३